Review 10 nhà hàng ở Sapa ngon và đắt khách nhất hiện nay | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
Review 10 nhà hàng ở Sapa ngon và đắt khách nhất hiện nay | Excitinghochiminhcity
Ongorora gumi epamusoro neDigiticket maresitorendi muSapa zvinonaka, maonero akanaka pazasi kuti unakirwe nendiro uye zvinokwezva kana iwe uchiuya pano kuzofamba!
1 1. Sapa Ban Pho Restaurant
2 2. Good Morning View Restaurant
3 3. Moment Romantic Restaurant
4 4. Sang Meo Restaurant
5 5. Viet Deli – Inonaka Northwest Cuisine
6 6. Red Dao House Restaurant
7 7. Cha Pa
8 8. Viet Emotion Sapa Kofi neRestaurant
9 9. Le Gecko Restaurant & Hotel
10 10. Little Vietnam Restaurant
1. Sapa Ban Pho Restaurant
Kero: 17 Le Van Tam, dhorobha reSapa, Lao Cai.
Maawa ebhizinesi: 09h00 – 24h00
Reference mutengo: Kubva ku30,000 VND / ndiro kana kupfuura
Resitorendi yeBan Pho inozivikanwa seresitorendi inoshandira hunyanzvi hwekuMaodzanyemba kwakadziva kumadokero senge: nyama yenguruve yemusango yakagochwa, ndiro dzesalad, hove dzakagochwa, sturgeon, taro hot pot… Iresitorendi ine chitarisiko chakanaka chaizvo. Ham Rong gomo saka nzvimbo yacho ine mhepo uye ine nhetembo. Yakareruka yemukati asi chikafu chinonaka, inoyevedza nzvimbo ndiwo mapoinzi ekuwedzera anoita kuti nzvimbo ino igare yakazara vanhu. Vanomirira vanokwanisawo kutaura Chirungu zvakanaka, zvichiita kuti vashanyi vekunze vagutsikane.
Kuuya kuresitorendi yeBan Pho, iwe unonakidzwa nemidziyo ine mitengo inokwanisika chete ye30,000 VND/ ndiro kana kupfuura. Iyo yekudyira ine boka rakakura revaenzi, kana uine chaunoda, unofanirwa kubata kuti utore tafura pamberi pebasa rakanakisa.
2. Good Morning View Restaurant
Kero: 47 Muong Hoa, Sapa, Lao Cai.
Runhare: 091 292 78 10
Maawa ebhizinesi: 8:00am – 10:00pm
Reference mutengo: 45,000 VND / ndiro kana kupfuura
Good Morning View Restaurant iresitorendi yeSapa ine nzvimbo diki asi inotonhorera. Iyo yemukati iri nyore asi ine mhepo uye yakachena ndiyo yakatanhamara mukana pano. Kunyanya, ndiro pano dzinotorwawo kubva kuchikafu chiri mudhorobha, saka dzakanyanya kutsva uye dzakachengeteka.
Iyo resitorendi zvakare ine maonero akatarisana neinoyevedza Muong Hoa mupata, ichibatsira vanodya vese kunakidzwa nekudya zvinonaka uye kuyemura nzvimbo yakanaka. Chikwata chevabiki vehunyanzvi, maitiro ebasa akazvipira, uye vashandi vanotaura mitauro yekune dzimwe nyika zvakanaka zvakare vanoita kuti nzvimbo yekudyira izare nevatorwa.
Zvimwe zvinonaka zvausingafaniri kupotsa kana uchiuya kuGood Morning View Resitorendi ndeiyi: huku curry, nyama yenguruve nhema, poto inopisa, poppumbap, noodles, spring rolls, coconut curry, spring rolls, bamboo sticky rice, nyama yakaomeswa nyati…
3. Moment Romantic Restaurant
Kero: 001A Thac Bac, TT. Sapa, Sapa, Lao Cai
Runhare: 098 288 49 65
Reference mutengo: 50,000 VND / ndiro kana kupfuura
Moment Romantic Restaurant iri pakati chaipo pedhorobha, padyo nevashanyi Sapa Silver Waterfall inoyevedza nyika. Iyi nzvimbo inoonekwa senzvimbo ine yakapfava asi yakapfava yekushongedza, madhishi akasiyana, mitengo inonzwisisika.
Mufananidzo: Moment Romantic Restaurant
Kana iwe uchida kutsvaga resitorendi muSapa ine yakanakisa Thang Co hunyanzvi, haufanirwe kupotsa Moment Romantic Restaurant. Kune mamwe madhishi akawanda pano Lao Cai hunyanzvi zvimwe zvakaita se: salmon inopisa poto, sturgeon inopisa poto, yehapwa nguruve, bhekoni …
Zvokudya zvakadai sepizza, mupunga wakakangwa, muto wembatatisi … zvakagadzirirawo kugovera kudya. Mamiriro ekunze muSapa anogara achitonhora, asi kuuya kuresitorendi, iwe unonakidzwa nemidziyo inopisa ye50,000 VND / dish chete kana kupfuura.
Kunyangwe nzvimbo yekudyira iri diki uye inogara yakazara vanhu, vashandi vanonyanya kufarira uye hushamwari. Pamusoro peVietnamese cuisine, iyo yekudyira menyu inewo akati wandei eEurope madhishi akadai soup, salmon saladhi, fries fries … izvo zvakakodzera kuedza.
4. Sang Meo Restaurant
Kero: 29 Fansipan, TT. Sapa, Sa Pa, Lao Cai, Vietnam
Reference mutengo: 60,000 VND / ndiro kana kupfuura
Kana ukaenda Fansipan tourism Ipapo haufanirwe kupotsa iyo yakanaka Sang Meo yekudyira ine inoyevedza nzvimbo. Nzvimbo yekudyira zvakare yakanaka kwazvo, yakakura uye ine mhepo. Mukati memukati unoyevedza, mune akawanda mataurirwo ane mwenje wekushongedza, hunyanzvi hwechivanhu. Iyo resitorendi inogona kugarisa vangangoita 180-200 madhiri panguva imwe chete, saka mapoka makuru evashanyi anogona kubhuka pachine nguva kuti ashandiswe zvakanyanya.
Sang Meo Resitorendi – Iyo Essence yeSapa Cuisine
Sang Meo Restaurant inonyanya kushandira Sapa hunyanzvi, saka menyu yakapfuma kwazvo. Nzvimbo iyi zvakare yakaverengerwa seimwe yevashoma Sturgeon hotpot restaurant muSapa super zvinonaka.
Kana iwe uchida kunakidzwa nehunyanzvi hwekuNorthwest, usakanganwa kuhodha ndiro kubva kunyama yemhuka, nyama yenungu, hove yemurwizi, chamois, armpit pig, hill chicken… Professional chef team,. Nzvimbo yekudyira yakakura, sevhisi ine shungu, inovimbisa kukupa kugutsikana kwakakwana.
Vashandi vane ushamwari, kana iwe usingazivi kwaunoenda mushure mekudya, ingobvunza uye iwe uchapiwa mirayiridzo ine kufunga.
5. Viet Deli – Inonaka Northwest Cuisine
Nzvimbo 1: 01 Le Van Tam, Sapa dhorobha, Sapa mudunhu, Lao Cai mudunhu – Runhare: 0214 627 8866
Nzvimbo 2: 06 Thu Dau Mot, dhorobha reSapa, dunhu reSapa, mudunhu reLao Cai – Runhare: 0214 628 0088.
Maawa ebhizinesi: 7:00am – 10:00pm
Viet Deli iri pakati chaipo peguta reSapa, ine maonero akatarisana nehukuru hunhu. Zvivakwa zviviri izvi zvakagadzirirwa nenzvimbo yakapusa asi yechimanjemanje, inodziya uye yakazara neNorthwest tsika.
Viet Deli restaurant nzvimbo 1 inyanzvi pakupa Sapa hunyanzvi hwakadai se: huku nhema ine mishonga yechivanhu yekuChina, nyama yenguruve yakakangwa, sarimoni yakakangwa, saradhi yehove, munyu wakakangwa tsuji, nyati mannequin, braised sturgeon… Inofungidzirwa menyu inokwana 50 ndiro marudzi ese emasaladhi, ndiro dzakasanganiswa, masaladhi, madhishi makuru, poto inopisa ndiro…
Iyo yekumisikidza ine 2 akasiyana mamenu, anonyanya kushandira muriwo inopisa poto buffet ine mutengo wakachipa, chete kubva 69k/munhu kana kupfuura. Unonakidzwa nemuriwo unotengwa kunze kwenyika kubva kudhorobha uye wohodha nyama yemombe, huku, nehove pachena.
Viet Deli inozivikanwa seresitorendi inoshanda mukati Sapa cuisineInokurumidza, ine shungu sevhisi maitiro inovimbisa kugutsikana kwevatengi vese.
6. Red Dao House Restaurant
Kero: 4B Thac Bac mugwagwa, Sapa
Runhare: 0214 3872 927
Maawa ebhizinesi: 7:30 a.m. – 10:30 p.m.
Red Dao House Restaurant iresitorendi inozivikanwa neyakasiyana siyana yezvivakirwo, mukati uye decor yakazadzwa netsika dzemadzinza eDao. Iyo nzvimbo yekudyira yakapamhama (ine inokwana 200 diners) uye rustic uye inoyevedza zvivakwa zvakwezva vashanyi vazhinji.
Iresitorendi iyi yakavakwa pakati pedhorobha, ichiita basa rekupa dzakasiyana siyana dzeEuropean – Asian ndiro. Yakanaka yekudyira maonero, yakananga kuHam Rong nzvimbo yevashanyi ine makomo. Iresitorendi inopawo mimhanzi, kurira kwenyere, kurira kwenyere, uye kuimba kunoitwa nevanhu veko.
Huya kuRed Dao restaurant, usakanganwa kunakidzwa nayo Sapa specialties zvakadai senguruve murume, hove hove, sturgeon, hove saradhi, hot poto ndiro, Thang Co … pamwe nezvimwe zvakawanda zvinokurumidza zvekudya. Vashandi vane ushamwari, kutaurirana kwakanaka kweChirungu kunovimbisa kukupa zviyeuchidzo zvisingakanganwiki.
7. Cha Pa
Kero: Ban Ho, Sapa, Lao Cai.
Maawa ebhizinesi: 08h00 – 22h30
Reference mutengo: 100,000 VND/munhu kana kupfuura.
Cha Pa Restaurant ine makore anopfuura makumi maviri echiitiko mukushandira vashanyi, ichivimbisa kukupa yakanyanya kugadzikana yekudyira nzvimbo. Iyi ndeimwe yemaresitorendi anonaka muSapa ane nhoroondo refu kwazvo yekushanda. Iyo yekudyira inokosheswa nenzvimbo yayo yakanaka, nzvimbo iri nyore, inyanzvi mukushandira Northwest hunyanzvi uye zvimwe zveEuropean ndiro.
Kana iwe ukaenda muboka rakakura, unogona kutarisa kumenyu ye90,000 VND / kushumira nendiro dzinoyevedza senge: deer yakagochwa nesimbi inopisa, nyama yemombe yakakangwa nemashavi, chayote yakakangwa, hove dzakakangwa, soup yakakangwa. bamboo shoots, Tea, michero, dhizeti… Unofanira kubata resitorendi pachine nguva kuti ugadzirwe uye basa rakazvipira.
Menyu yechikafu muCha Pa inoonekwa seyakasiyana asi mitengo yacho inokwanisika. Zvidyo zvinogadzirirwa zvinoenderana nemaitiro eNorthwest cuisine, zviri nyore asi zvichiri zvinonaka. Izvo zvinongedzo zvese zvine hunyanzvi hwemakomo nemasango, saka zvakachengeteka zvakanyanya.
8. Viet Emotion Sapa Kofi neRestaurant
Kero: 17 Xuan Vien, TT. Sapa, Sapa, Lao Cai
Runhare: 091 203 29 08
Maawa ebhizinesi: 7:30 – 23:00
Viet Emotion Sapa Kofi uye Resitorendi iresitorendi inonaka muSapa ine yakasarudzika yakasarudzika yakafanana nedhorobha rekare reHoi An. Kuona kweresitorendi yakatarisana neCau May mugwagwa yakanaka kwazvo, inogara yakazara nevanhu vanopfuura.
Iyo nzvimbo yekudyira inoonekwa seyerudo, yakanaka uye yakapfava, ine akawanda echokwadi makona ekugara kune vechidiki. Kwete chete nzvimbo inoyevedza yekudya, Viet Emotion Sapa Kofi uye Resitorendi zvakare iresitorendi Sapa kofi inoshanyirwa nevashanyi.
Menyu yeresitorendi iyi inofungidzirwa kuti ine 100 ndiro dzinonaka dzakaita se: mupunga wakakangwa, pho, ndiro dzemuriwo, muto, pasta, chikafu chegungwa, saladhi, pizza, sandwich… Zvinwiwa zvekofi, cocktails, waini…
Iwe haungofariri chikafu chinonaka chete asi zvakare uchashumirwa nechido neakanaka kwazvo anotaura Chirungu vashandi, vakagadzirira kupindura mibvunzo yako nezve Sapa tourism. Kana iwe uchida rutsigiro rwekombuta unogona kuishandisa mahara pano.
9. Le Gecko Restaurant & Hotel
Kero: 33 Xuan Vien, TT. Sapa, Sapa, Lao Cai
Runhare: 0214 3871 898
Maawa ebhizinesi: 7:00 – 23:00
Le Gecko zvakare iri resitorendi uye bar yakaoma yehotera yezita rimwe chete. Nzvimbo yacho yakakura chaizvo, inokwana vanhu vangangosvika mazana maviri. Iyo resitorendi yekuona yakanaka kwazvo, yakatarisana nepakati pedhorobha. Nzvimbo ino inonyanya kushandira chikafu cheEurope nemakeke, mitengo inokwanisika, vashandi vebasa rinokurumidza, saka yakazara nevanhu.
Le Gecko ndeimwe yemaresitorendi eSapa yakavhota sekero yerudo yakanyanya kufambidzana. Le Gecko anga achishanda kwemakore makumi maviri aine motto “Mutengo unodhura, mhando yechokwadi” inofarirwa zvakanyanya nevashanyi vekumba nekune dzimwe nyika. Pano, unogona kutarisa-mukati zvakanaka pamadziro echiFrench-maitiro ekuvaka uye anoyevedza emukati akagadzirwa nemaoko evagari venzvimbo.
Iwe unogona kutarisa kumakamuri eLe Gecko kuitira nyore kuwana French-Italian cuisine uye kunakidzwa neyakasiyana yekunwa menyu pano!
10. Little Vietnam Restaurant
Kero: 14 Muong Hoa, TT. Sapa, Sapa, Lao Cai
Runhare: 097 222 77 55
Maawa ebhizinesi: 9:00 – 23:00.
Reference mutengo: 55,000 VND / ndiro kana kupfuura
Kufamba kuenda kuSapa, unogona kunakidzwa akasiyana eEuropean – madhishi eAsia kuLittle Viet Nam Restaurant. Zvokudya pano zvakanzi zvose zvinonaka uye zvakanaka. Menyu yacho yakasiyana neanosvika zana ekutanga, makosi makuru uye mwaka wemuchero wekudya.
Vashanyi vazhinji vakavhotera Little Viet Nam Restaurant seresitorendi inonaka muSapa yakanaka kunge gem rakavanzika, nekuti nzvimbo yacho yakanaka kwazvo uye yakatetepa. Kuuya pano, iwe uchagutsikana zvakanyanya nekona yega yega yekushongedza, sevhisi inogara ichinyemwerera uye chikafu chinonaka kwazvo. Usakanganwa kuyedza Sapa dhadha, kokonati shrimp curry, spaghetti, Hue nyama yemombe noodle soup, nyama yenguruve rib mupunga, pizza…
Sapa inzvimbo inoyevedza kune vese vashanyi, saka nzvimbo yekutandarira uye yekudyira masevhisi pano zvakare akasiyana kwazvo. Ndinovimba nemazano gumi ekudyira muSapa akakurudzirwa neDigiticket pazasi, zvinozoita kuti rwendo rwako ruve nyore! Mukuwedzera, iwe unogona kureva dzimwe nzvimbo dzekudya muSapa dzakadai se:
Usakanganwa kugadzirisa mamwe mashoko Sapa travel guide Iyo yazvino inogovaniswa neDigiticket kuita kuti nzendo dzako dzive nyore uye dzipere.
READ Những hồ bơi đẹp ở Sài Gòn | Excitinghochiminhcity
← Top 8 quán gà mẹt Hà Nội ngon nổi tiếng | Excitinghochiminhcity
In, scan tài liệu màu giá rẻ | Excitinghochiminhcity →